Ajaaniib Sharci daro ku joogtay Magaalada Muqdisho oo Maxkamad lasoo taagayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada amaanka Dowlda Soomaaliya ayaa howlgalo ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho waxa ay kusoo qabteen dad ajaaniib ah oo la sheegay in si sharci daro ah ay ku joogeen Magaalada Muqdisho ugana shaqeesanayeen.
Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur , oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Maxkmaada Gobolka la horkeenayo dad ajaaniib ah uu sheegay in dalka ay kusoo galeen si sharci daro ah.
”Maxkamada gobolka Waxaa lasoo taagayaa dad ajaaniib ah oo si sharci daro ah dalka kusoo galay uguna sugnaa, horeyna waa loo maxkamadeeyay dadkan oo kale, qof kasta oo sharciga dhinac mara ajnabi ha ahaado ama Muwaadin ha ahaado sharciga ayaa ka weyn lana horkeenayaa” Ayuu yiri Xaashi Cilmi Nuur.
Gudoomiyaha Maxkamada Gobolka ayaan faah faahin ka bixin tirada dadka ajaaniibta ah ee Maxkamada lasoo taagayo, waxa uuna tilmaamay in dadkaasi ay hada gacanta ku hayaan laamaha amaanka ayna ka warsugayaan.
Magaalada Muqdisho waxaa kusugan dad badan oo ajaaniib ah oo ka kala yimid Wadamada Dariska iyo kuwa carbeed, dadkan ayaana isugu jira kuwa dalka kusoo galay qaab sharci ah kuna jooga iyo kuwa iyana sharci daro kusoo galaysido kale uga shaqeesanaya.